ချွေးစေးထွက်ခြင်းနှင့် ညဘက်ချွေးထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေလဲ - Hello Sayarwon
Dr. Zin Wai Yan Lin မှ ရေးသားသည်။ 12/10/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ပူသော ရာသီဥတုတွင် သို့မဟုတ် အားကစားလုပ်ချိန်တွင် ချွေးထွက်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို အေးမြစေသည်။ သို့သော်လည်း စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ အပြင်းအထန် နာကျင်ခြင်း စသော အရင်းခံ အကြောင်းရင်းများကြောင့် ချွေးထွက်သော အချိန် များလည်း ရှိသည်။ ထိုအခြေအနေကို ချွေးစေးထွက်သည်ဟု ခေါ်သည်။
ချွေးစေးထွက်ခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ။
ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်မြင့်တက်လာပြီး အေးရန် လိုသော အချိန်များတွင် ပုံမှန်ချွေးထွက်ခြင်း ဖြစ်ပွားသည်။ သို့သော် ချွေးစေးထွက်ခြင်းသည် အရင်းခံ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ခံစားနေရသောကြောင့် ထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တိုက်ခိုက်မလား ထွက်ပြေးမလား တုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်စေသော အရာရာသည် ချွေးစေးထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ချွေးထွက်ခြင်းသည် ညဘက်တွင် အဓိကဖြစ်ပါက ညဘက် ချွေးထွက်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။
ချွေးစေးထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများ
အလွန်အမင်း ချွေးထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်း ရင်းများစွာ ရှိသည်။ တိကျသော အကြောင်းရင်းသိရန် ဆရာဝန်သည် ရောဂါအဖြေရှာခြင်းနှင့် စစ်ဆေးမှုများစွာ လုပ်ရန် လိုသည်။ အောက်တွင် ချွေးစေးထွက်ခြင်း၏ အဖြစ် များသော အကြောင်းရင်းအချို့ကို ဖော်ပြထားသည်။
ပြင်းထန်သော ဒဏ်ရာများမှ အလွန်အမင်း နာကျင်ခြင်း
နှလုံးသွေးကြော ရုတ်တရက်ပိတ်ဆို့ခြင်းကဲ့သို့ နှလုံးရောဂါများ
သွေးတွင်း သကြားပမာဏ ပုံမှန်မရှိခြင်း
Idiopathic hyperhidrosis ။ ဤကျန်းမာရေး ပြဿနာ ဖြစ်သူများသည် အကြောင်းရင်းမသိရဘဲ ချွေးအလွန်ထွက်သည်။
ရောဂါပိုးကူးစက်မှုများ။ ဘတ်တီးရီးယားကူးစက်မှုများ ဥပမာ- တီဘီရောဂါ၊ နှလုံးအတွင်း အမြှေးပါး ရောင်ခြင်း၊ အရိုးတွင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ ပြည်တည်နာ သည် အလွန်အမင်း ချွေးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ညဘက်ချွေးထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ညဘက် ချွေးထွက်ခြင်းသည် HIV ပိုးကူးစက်မှု၏ လက္ခဏာ တစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ကင်ဆာများ။ ကင်ဆာ အစောပိုင်းအဆင့်တွင် ညဘက် ချွေးထွက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ညဘက် ချွေးထွက်ခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်သော ကင်ဆာအမျိုး အစားမှာ Lymphoma ဖြစ်သည်။
ဆေးများ။ အချို့ဆေးများသောက်ခြင်းသည် အလွန်အမင်း ချွေးထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ညဘက် ချွေးထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အဓိကဆေးမှာ စိတ်ကျရောဂါပျောက်ဆေးများ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယမှာ အခြား စိတ်ရောဂါများအတွက် ဆေးများဖြစ်သည်။ တတိယမှာ aspirin,paracetamol စသော အဖျားကျဆေးများ ဖြစ်သည်။
သွေးတွင်း သကြားနည်းခြင်း။ ၎င်းကို ဆေးပညာတွင် hypoglycemia ဟုခေါ်သည်။
ဟော်မုန်းရောဂါများ။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဟော်မုန်း ပမာဏတွင် ပြဿနာရှိသော လူများသည် ချွေးစေး များထွက်နိုင်သည်။
ဤကျန်းမာရေး အခြေအနေအတွက် သီးခြားကုသမှု မရှိပါ။ ၎င်းကို ဖြေရှင်းရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းမှာ အရင်းခံ အကြောင်းရင်းများကို ကုသခြင်း ဖြစ်သည်။ ချွေးစေးထွက်ခြင်းကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များစွာကို ကြိုတင် သတိပြုနိုင်ကာ စောစီးပြီး သင့်တော်သော ကုသမှု ရနိုင်သည်။
ချွေးစေးထွက်ခြင်း မဖြစ်အောင် အသုံးဝင်သော အကြံပြုချက်အချို့ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သက်သောင့်သက်သာ အပန်းဖြေခြင်းဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို ထိန်းချုပ်ပါ။
အိပ်ခန်းတွင် မွန်းမံဆင်ယင်ခြင်းများလုပ်ပါ။ အလင်းရောင်များ ဖယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခန်းအပူချိန် လျှော့ချခြင်း လုပ်ပါ။
သွေးတွင်းသကြားနှင့် သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိရန် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော စားသောက်မှုပုံစံ ထားပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း လျော့ပါ။
ချွေးစေးထွက်ခြင်းသည် ပိုဆိုးလာပါက ကျန်းမာရေး အကူ အညီရယူပါ။
Situation. Night Sweats and Cold Sweats: Possible Causes. http://www.webmd.boots.com/sleep-disorders/guide/night-sweats-cold-sweatsAccessed February 28, 2017
Causes and Treatment of Cold Sweats. https://www.verywell.com/causes-and-treatment-of-cold-sweats-1298949Accessed February 28, 2017
ကိုကိုတို့ရဲ့ ချွေးနံ့နဲ့ မမတွေရဲ့ အချစ်စိတ်ဟာ ဆက်စပ်နေသလား